Nin lagu Xukumay 2 Laba Sanno oo Xadhiga kadib markii uu Iibiyay Dameer aan ILKO lahayn .W.q Qareen / Khadar Aar | Hangool News
Nin lagu Xukumay 2 Laba Sanno oo Xadhiga kadib markii uu Iibiyay Dameer aan ILKO lahayn .W.q Qareen / Khadar Aar
Dadka cuna qaadka iyo Sigaarka ee Soomaalida waxaa u badan Ragga ,inkastoo wakhtigan aan ku jiro Dumarkuna kusoo bireen ,qaadku waa nooc kamid ah waxyabaha keena waaalida ,Somaliduna u taaqano MIRQAAN, waa maxay Mirqaanku? waxa weeye miskaxdada oo ku tusisa kuuna muujisa Dhalan teed iyo Riyo been ah .
Mirqaan-sane! waa Nin wakhtigii iigu danbaysay ku noolaa magalada Hargaysa waxa uu ahaa Nin ku caan baxay Cunista Geedka loo yaqaano qaadka ,kaaso Somalida Badankedii ku noqday aafo qaran oo si looga baxana la garan la’yahay ,Mirqansane maha Nin Da’wayn hadana Gabax ayuu yidhi ,Aduun ma hayo, Aakhirana ma haybsado ,isma Xisaabiyo mana xisaabtamo ,Guur iyo Gabadh ma hawasto ,mana haleelo in uu ka fikiro .
Mirqaansane waa Nin runtii dhalinyaro ah ,waxa uu subax kasta oo Ilahay keenaba u shaqo tagaa Saylada Xoolaha ee Hargaysa si uu uga raadsado waxooga dhaqala ah oo uu ku noolado Balwadiisana uu ku dabaro,waxyar iyo wax waynba wixii uu kasoo kasbado intaanu meelkale kula leexan ayaa waxa uu la tagaa kabadhada qaadka lagu iibiyo ,loogana dhawaqo laba’daba lix dhe ,laba’daba Lixdhe laba’daba Lix dhe ,kadibna waxa uu ka iibsada Qaadki lagu baleeyay ee uu ku baaba’ay .
Mirqaansane markii aan qaday siyay ,waxooga Nafina kusoo noqotay waxana na dhex martay sheekadan
Aroor arooryaha ka mida ayaan aniga oo ku jira hawl-maalmeedkaygii shaqada ee Dilaalka ayaa waxa ii yimi Nin doonaya in uu Iibiyo Dameerkiisa ,kadibna waxa uu iga codsaday in Dameerkan aan cid uga iibiyo Dilaal fiicana uu iga siinayo ,waa dilaal iyo cadadiiye waxa aan u hawl galay sidii aan ugu iibin lahaa
Hadaba sida cadada marka Xoolaha Nool la kala iibsanayo waxaa jira qaab lagu ogaado Neefkan iyo Xaladiisa iyada oo laga eegaayo meelo fara’badan ,Dadka yaqanana sidayda waxabay Xaalada Neefka ku qiimeyaan ILKA CABIR wax dhibata ah oo igaga soo noqdana waligay maan arkin.
Balse Saxiibow waligay Dameer iyo Dameertona Dilaal kamaan noqon Risiqna kamaan dayin ,oo waxaban u aqaanay Xoolo Shaydaan ,balse kan (Dameerkan) waxaa igu kalifay Suuqa oo maalinka yar liitay iyo Xoolaha Saylada la keenay oo aan badnayn.
Intaan Gacanba layla soo gaadhin ayaan waxa aan maqlay ,makana mise waa kee ,ma hubtaa iwm ,kadibna Gacanta laygu dhigay waxaa la ii kaxeeyay dhankii Saldhiga Boliska ,waxaan inta la isii wado aan ku tirabayaa waar maxaa dhacay ,maxaan sameeyay ,halkee laywadaa .balse Nimanka Boliska ee i wadaa waxa ay ii sheegeen in Saldhiga layga soo dacweeyay ,Sababtana Saldhiga la iiga sheegi doono ,iyaga oo igula taliyay in aan is’dajiyo.
kadibna waxa la igeeyay Saldhiga Boliska ,waxa su’aalo kooban na waydiyay Ninkii Obiga Boliska fadhiyay kadibna Suumanka iyo Kabaha ayaa nalaga saaray, aniga iyo Alla uma naxariistii Iibka Dameerka ila soo doontay .
Sida cadada Malin ka bacdi waxaa naloo Gudbiyay Maxkamada ,kadibna Ninkii Xaakinka ahaa ayaa waxa uu su’aalo waydiiyay Ninkii Dameerka Iibiyay iyo kii iibsaday .
Qaabkan ayaa Su’aalaha loo waydiiyay Ninki Damerka Iibiyay :-
Hadimo : waxaan ku ogaday muddo badan ayaan haystay ,Sacadii aan Iibinayayna Rashin adag oo Arabikhi iwm ah ayaan soo siyay , si fiican ayanu u cunayay , hadii uu Ilka la’yahay ma’usan cuneen Raabsigiisana maan maqleen ,mararka qaarna Dameerkaygu wuu ilka cadeeyaa taasna kadibna Ilkahisa ayaan arkaa .
Dacwadii marka ay halkaasi marayso ayaa waxa wax la suä’aalay Ninkii Dameerka laga Iibiyay ee Mudiciga ahaa oo lagu Nanayso Daacad ,waxanay su’aaluhu u dhaceen sidan :-
Mirqaansane:- Magacaygu waa …….
Mirqaansane : Anigu Afkiisa maan eegin intii uu na’ag joogayna ma uusan Ciyin,
Maanta oo ay tariikhdu tahay …….isla markana ay maxkamadu u fadhiisatay kiiskii DAMEERKA waxa ay maxkamadu cadaynaysaa in Ninka Dameerka iibiyay uu yahay Khayin isla markana uu Iibiyay Dameer uu ku ogaa Dhaliil iyo Ceeb kasoo ahaa Dameer aan lahayn wax Ilka ah .
Waxa kaloo ay Maxkamadu soo ogaatay in Muddo Kooban Dameerkani Ilka la’aa Ninkan Dameerka iska lihina uu Cunto uga dhigi Jiray Waxyabo uu u Ridqo(shiido) madama aanu Dameerkani lahayn Ilko uu wax ku cuno .
Akhriste sheekadu waxa ay kusoo dhamaatay Qaabkasi , waxana suura gala in Ninka Odayga ee Mirqaansane waxa galiyay Xabsiga iyo Xadhiga in ay tahay waalida Qaadka oo ah mid maanta Somali oo dhan aafaysay gar ahaan Da’yarkii .